KwiNdlu Ngezandla zakho
Ukuba uke wazibandakanya ekuhlobiseni igumbi leholide, ngoko uyayiqonda ngokucacileyo indima ebalulekileyo edlalwa apha yizo zonke iintlobo zentlalo: iibhaluni, izigulane kunye nemihlobiso eyahlukeneyo. Namhlanje siza kufunda indlela yokwenza intonga yeentliziyo ngezandla zethu, eziza kunceda ukuhlobisa nayiphina indawo, iofisi okanye iholo. Ngokuqhelekileyo ezi ngqungquthela zenziwa kwiSt. Valentine's Day, kodwa zingasetyenziselwa ezinye ieholide: imitshato, imikhosi, njl njl.
Indlela yokwenza iigrafti zentliziyo?
Lungiselela iphepha elibomvu elinamacandelo omsebenzi ngomsebenzi (mhlawumbi, khetha i-dense kwaye iguquguquke ngexesha elifanayo), umkhonto obhaliweyo, umlawuli wensimbi kunye nomgxinisi. Kwakhona uzakufuna indawo ekhethekileyo yokusika iphepha kunye necandelo (libizwa ngokuba ngumthamo ophakamileyo). Ukuba awunayo umbhoxo onjalo, unokuwunqumla kwiglasi, ibhodi yokusika okanye enye indawo elukhuni ongenakucinga ukukhangela.
I-Garland yeenhliziyo ngezandla zabo zenziwa ngokukhawuleza kwaye ngokukhawuleza.
Beka iphepheni lephepha ngokukhawuleza kwaye ulinqumle kumacwecwe obubanzi obu-2 cm. Kususela kule nani lixhomekeke kubukhulu beentliziyo zexesha elizayo, kunye nenani labo-ubude begranti. Ukuba uceba ukwenza i-garland ende, unokusika amanqaku amaninzi ngexesha elinye.
Gcwalisa umgca ngamnye kwisiqingatha. Thatha iqela elinye lephepha uze ulikhusele nge-stapler.
Ngoku ugoba iiplani ezimbini ezikhululekile zomgca ngaphakathi, ukwakha intliziyo. Ukhusele kakuhle ngaphakathi. Uya kuba nentliziyo yokuqala.
Isiqendu ngasinye esilandelayo sifakwa kwi-bend phakathi kweesahlulo ezimbini zeentliziyo zangaphambili, zibophe ngeentsimbi. Unokwenza okungafaniyo: ukuqala kwintliziyo yesibini, sisebenzisa intonga yomgca ukuya kwisiseko seqendu langaphambili kwaye uyiguqule phantsi, ngokukhawuleza ukugcina kokubili kwesibini kunye nentloko yesithathu, kunye njalo. Khetha indlela ekhetheke kakhulu kuwe, kwaye igarland "iya kukhula" ngokukhawuleza.
Ingubo enjalo yeentliziyo inokwenziwa kwiphepha lemibala emininzi okanye kwi-fabric-type fabric. Ukuxhamla kwinqaku elinjalo kukuba liyakwazi ukulungelelaniswa ngeengqungquthela ezihle kwaye zifakwe kwifenitshala, i-chandelier okanye ilula eludongeni.
I-Garland yeentliziyo inokwenziwa ngomtshato, ngenxa yokuzalwa komhla, ngenxa yokubhidliza ubudlelwane, njl. Nxubile iindwendwe zakho okanye ummkeli wombhiyozo, uhlobisa indlu nge "chips" ezikhazimulayo!
Ibalali elinzima ngakumbi linokwenziwa kwiibhaluni .
Unokwenza njani i-swan kwi-towel?
Inqabakazi yesiFrentshi - indlela yokuthunga?
Iintyatyambo ezivela kwiiskese ngezandla
I-Kanzashi brooch - itlasi yeklasi
Amanqaku omnyaka omtsha kwiibhotile zeplastiki
Amakhontanga ekhishini ngezandla
Iphepha elichaphazelekayo irises
I-Bouquet yamathoyizi enezandla
Ukutsalwa kweeyure zeeyure - kwiklasi yeklasi
Indlela yokwenza iilly yephepha?
I-Poncho ngezandla zakho
Iidolesi zenziwe ngeengubo ngezandla zazo
Ukuzivocavoca kunye neentsimbi zokulinganisa imilenze
Umnyama omnyama-omhle kunye omubi
Izilwanyana zorhudo zokurhudo
Kukuphi ukuthenga ngokuthe tye kwi-Italy?
I-Furuncle kwindlela yokhathalela ubuso
Olga Skazkina - iimpahla
I-Nihilism kwintlalo yanamhlanje-iindidi zayo nemiphumo
Izibini eziziwayo ezidumileyo ezithandanayo kwiskrini kwaye zithiywe ebomini
I-Alfalfa yokuhlwayela - nini ukuhlwayela?
I-Oatmeal Face Mask
I-cyst Colloid ye-thyroid gland
Iindaba zeFebhuwari 2014
UArnold Schwarzenegger - amagama ambalwa malunga ne "Terminator" kunye noDonald Trump
Nguwuphi na i-kettle yamanzi engcono?
Ungayinqumla njani umhlaba kwindawo yokubumba?
Ubisi oluninzi luhle kwaye lubi
Uphawu lwe-zodiac Sagittarius - inkcazo ecacileyo kunye nokuhambelana nezinye iimpawu
Ngaba kunokwenzeka ukutya imbewu ye-sunflower ekudleni?
I-jowan jam - enhle neyobubi